पाथिभारा माताको कृपाले यहाँको दिन सुखद रहोस्, साउन २५ गते सोमबारको आफ्नो राशिफल हेर्नुभयो ? « Gaunbeshi
पाथिभारा माताको कृपाले यहाँको दिन सुखद रहोस्, साउन २५ गते सोमबारको आफ्नो राशिफल हेर्नुभयो ?
वृषः सानो प्रयत्नले राम्रा तथा उपलव्धी मुलक कामहरु गर्न सकिनेछ । पढाई लेखाईको लागि समय उत्तम रहेको छ भने खोज तथा अनुसन्धानको क्षेत्रबाट भनेजस्तो नतिजा हात पार्न सकिनेछ । प्रेम सम्बन्ध सकारात्मक बाटोमा बढ्नेछ । व्यापार व्यवसाय फस्टाएर जानेछ भने धार्मिक यात्रा हुने प्रवल सम्भावना रहेको छ । बिहानको समय मध्ययम रहेकोले यात्रा गर्दा ध्यान दिनुहोला ।
मिथुनः बिहानको समय राम्रो रहेकोले व्यापार व्यवसाय फस्टाएर जानेछ । पढाई लेखाईमा प्रतिस्पर्धी हरुलाई किनारा लगाउँदै नतिजा आफैतिर ल्याउन सकिनेछ । आफन्त तथा सहपाठीहरुबाट सुनिने शुभ समाचारले उत्साह जगाउनेछ । माया प्रेमको डोरो कसिलो भएर जानेछ । मध्यान्हबाट समय मध्यमय रहेकोले भौतिक सम्पत्ती तथा विलाशी वस्तुका प्रयोग गर्दा ध्यान दिनुहोला ।
तुलाः साहसी तथा पराक्रमी काम गरेर प्रशस्त लाभ लिन सकिनेछ । भौतिक साधन स्रोत जुट्नाले काम गर्न सहज हुनेछ । न्यायिक निर्णयहरु तपाई आफ्नै पक्षमा पार्न सकिनेछ । कृषि तथा वित्तिय क्षेत्रसँग सम्बन्धीत कामबाट मनग्गे लाभ लिन सकिनेछ । तर पनि आमा तथा आफन्त सँग टाडिएर यात्रा गर्नु पर्दा मन खिन्न हुनेछ । सवारी साधको प्रयोग गर्दा वा जग्गा सम्बन्धी काम गर्दा ध्यान दिनुहोला ।
वृश्चिकः व्यापार व्यवसाय फस्टाएर जाने तथा सापटि दिईएका रकमहरु फिर्ता आउनाले दैनिकी सुदृढ हुनेछ । आफन्त तथा कुटुम्वबाट सहयोग पाईनेछ भने मिष्ठान्न भोजन ग्रहण गर्ने अवसर जुर्नेछ । माया प्रेमको गाँठो कसिलो भएर जाने तथा जीवन साथीको भरपुर सहयोग पाईनेछ । न्यायिक निर्णयहरु तपाईकै पक्षमा आउनेछन् । छोटो तथा उपलब्धी मुलक यात्रा हुनेछ ।